मेची अस्पतालका मिर्गौला बिरामीको स्वास्थ्यमाथि बिराङ हेल्थ केयरको खेलबाड – Anusandhan Online
मुख्य पृष्ठ /News/मेची अस्पतालका मिर्गौला बिरामीको स्वास्थ्यमाथि बिराङ हेल्थ केयरको खेलबाड
पार्थ मण्डल) झापा । सरकारी स्वामित्वमा रहेको सात वटा मेसिन र स्वास्थ्य सामग्रीसहित हेमोडायलिसिस विभाग मेची अस्पताल भद्रपुरले बिराङ हेल्थ केयर (बिराङ टेडिङ प्रा.लि) ले जिम्मा लगाएको छ । हेमोडायलिसिस विभाग बिराङ हेल्थ केयर (निजी कम्पनी)ले जिम्मा पाएपछि त्यहाँ उपचारका लागि जाने गरेका विपन्न तथा असहाय मिर्गौला बिरामीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न थालेको पाइएको छ ।
अस्पताल सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम बिराङ हेल्थ केयरले अस्पतालसँग गरेको सम्झौता विपरीत नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र बिरामीलाई सेवा दिइरहेका छन् । सरकारी कोटामा निःशुल्क उपचार गराइरहेका मिर्गौला बिरामीहरू अन्यत्र उपचार गराउन जान नसक्दा बिराङ हेल्थ केयरको लापरबाहीपूर्ण सेवा लिन बाध्य छन् । उनीहरूको गुनासो न त अस्पताल प्रशासनले सुनिदिएको छ, न त बिराङ हेल्थ केयरका आधिकारिक व्यक्तिले नै । त्यसैले डायलिसिस विभाग मेची अस्पताल प्रशासनले पुनः आफ्नै स्वामित्वमा लिएर चलाउनु पर्ने सबै मिर्गौला बिरामीको एउटै साझा माग रहेको छ ।
अस्पतालले निजी कम्पनीलाई डायलिसिस विभाग जिम्मा लगाएदेखि यहाँ उपचाररत मिर्गौला बिरामीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुन थालेको मिर्गौला पीडित दमक नगरपालिका– ५ निवासी ३९ वर्षीय देवीप्रसाद दाहालले गुनासो पोखे । ‘बिहान आएर अस्पतालमा डायलिसिस गरेर गयो, बेलुका घर पुग्दै गाह्रो हुन थाल्छ,’ उनले भने, ‘निजी कम्पनीले दुई वटा डायलिसिस मेसिन ल्यायो, तर महिना दिन नचल्दै दुई वटै बिग्रियो, मेसिन अभाव र बिरामीको चापले चार घण्टा डायलिसिस गराउनुपर्ने केयरको आदेशमा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले आधादेखि एक घण्टासम्म समय कटौती ग¥यो, जसले थप स्वास्थ्यमा समस्या हुन थाल्यो ।’ निजी कम्पनीले लिएदेखि स्वास्थ्य सामग्रीको पनि चरम अभाव देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘कहिले सिरिन्ज हुँदैन, कहिले गज हुँदैन, कहिले निरील हुँदैन, बिरामी लगेर बेडमा सुताएपछि सामग्री खोज्न हिडछन् स्वास्थ्यकर्मीहरू ।’ त्यति मात्र नभएर दिनभरि डायलिसिस विभागभित्र नियमित मिर्गौला बिरामीको उपचार हुन्छ । ‘राती चाहिँ त्यही बेड र उपकरण प्रयोग गरी कोभिडका बिरामीको उपचार गराइन्छ,’ उनले भने, ‘यो सरासर हाम्रो ज्यानमाथि खेलबाड हुँदैछ, बाहिरबाट आउने कोरोना संक्रमित मिर्गौला बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्न पाउँदा केयरले यस्तो लापरबाही गरिरहेको छ ।’ निजी कम्पनीको यस्तो लापरबाहीबाट हामीलाई बचाउन अस्पताल प्रशासन पुनः आफ्नो जिम्मामा डायलिसिस विभाग लिनुपर्ने हाम्रो माग रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै अर्को मिर्गौला पीडित दमक– १ निवासी ३२ वर्षीय अरुण विश्वकर्माले पहिला मेची अस्पतालले डायलिसिसमा दिइरहेको सेवा सुविधा अहिले निजीले लिएपछि केही नभएको बताए । जसले गर्दा यहाँ उपचाररत मिर्गौला बिरामी सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको उनको भनाई छ । ‘स्वास्थ्यमा समस्या भएर आकस्मिक डायलिसिस उपचारका लागि यहाँ आउँदा सरकारी कोटामा रहेका नियमित बिरामीले पनि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘एक पटक डायलिसिस गराए बापत २५ सयदेखि ३५ सय तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस बापतको बिल पनि दिँदैन, चिट जस्तो एउटा कागजमा लेखेर दिन्छ ।’
‘निजी कम्पनीले तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी पठाउनु पर्नेमा, सिकारु स्वास्थ्यकर्मी पठाइदिन्छ, त्यही सिकारु स्वास्थ्यकर्मीले हाम्रो उपचार गर्न पनि जाँदैनन्, सुई घोच्दा पनि दुखेको महसुस हुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार बिरामीलाई प्रयोग गरिने गज पकाउनु पर्ने हुन्छ । विगत लामो समयदेखि नपकाएको गज बिरामीलाई प्रयोग गरिरहेको छ । गजकै कारण शरीरमा इन्फेक्सन भई केही बिरामीले अकालमै ज्यान पनि गुमाउनु परेको बताए ।
‘उपचारको क्रममा बिरामीलाई सारो पर्दा अस्पतालको कुनै पनि मेडिकल अफिसर आउँदैन, किनभने अस्पतालले निजीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ, उनीहरू पनि किन आउँछन् त ? ’ उनले भने । हाम्रो बाच्ने आधार भनेकै डायलिसिस हो, अस्पताल प्रशासन र समितिले यसबाट पनि हामीलाई वञ्चित बनाउन खोजेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो एक सूत्रीय माग छ, अस्पतालले नै डायलिसिस विभाग चलाउनुपर्छ ।’
त्यसैगरी शिवसताक्षी नगरपालिका– ४ निवासी दुर्गा बुढाथोकी आफ्नी ३० वर्षीया छोरी सम्झनालाई लिएर हप्तामा दुई पटक मेचीमा डायलिसिस गराउन आउँछिन् । डायलिसिस उपचार सेवाप्रति उनको गुनासो पनि त्यस्तै छ । ‘सरकारी हुँदा सेवा राम्रै थियो, बिचमा बिस्तारै सेवा नराम्रो हुँदै गयो,’ सम्झनाका आमा दुर्गाले भनिन्, ‘निजी कम्पनीले लिएपछि उपचारमा लापरबाही हुन थाल्यो, सरकारले दिने सेवा सुविधा भने जस्तो छोरीले पाउन सकिरहेको छैन ।’ दुई पटक मैले पनि २५ सय रुपैयाँ तिरेर छोरीको उपचार गराएको उनले बताइन् । हाल मेचीमा पाँच वटा मेसिनबाट ४१ जना मिर्गौला बिरामीले हप्ता दुई पटक नियमित डायलिसिस गराउँदै आएको छ ।
जसका लागि सात जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । तालिम प्राप्त तीन जना रहेको छ, भने अन्य चार जनाले तालिम लिएको छैन । यता केयरले डायलिसिस विभागको हेरचाहका लागि राखेको मेनेजर सुगम पोखरेललाई जागिरबाट निकालिदिएको छ । मेनेजर पोखरेलले बिरामीको समस्या र पक्षको बारेमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई गुनासो राखेकै कारण उनलाई जागिरबाट हटाइएको छ ।
केयरले डायलिसिस विभाग जिम्मा लिएदेखि मेनेजर भएर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दै आएको बताउँदै पोखरेलले भने, ‘एक महिनासम्म सबै कामकाज ठिकै थियो, बिस्तारै बिस्तारै केयरले वास्ता गर्न छाडिदियो, जसले गर्दा बिरामीहरू समस्यामा पर्ने थाले, बिरामीको पक्षमा बोल्दा जागिरबाट निकाल्यो ।’
‘भद्रपुरकै स्थानीय भएकाले आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री मेडिकल सञ्चालकहरूसँगको सहकार्यमा बाँकीमा ल्याएर भए पनि डायलिसिस चलाइरहेका थियौँ, कम्पनीले स्वास्थ्य सामग्री भण्डारण नगर्दा यस्तो दुःख पनि ग¥यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म मेडिकलहरूमा चार लाख बढी बाँकी छ, त्यसको पैसा पनि कम्पनी पठाएको छैन ।’ पछिल्लो पटक डायलिसिस विभागमा लापरबाही बढ्दै गयो । बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नुहुँदैन भनी बारम्बार कम्पनीलाई जानकारी गराएको उनले बताए । तर, कम्पनीले हाम्रो कुरा सुन्न चाहेनन्, अस्पताल प्रशासनले पनि स्थलगत अनुगमन नगर्दा डायलिसिस विभागमा समस्या बढ्दै गएको उनको भनाई छ । त्यस्तै कार्यालय सहयोगी पुनम तामाङले कम्पनीले समयमा तलब नदिने गरेको गुनासो पोखिन् । कम्पनीको विषयमा जसले बाहिर आवाज उठाउँछ, उसलाई जागिरबाट निकालिदिने गरेको उनले बताइन् ।
सरकारी सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको रजाइँ
विपन्न, असहाय र गरिब मिर्गौला बिरामीहरू चर्को शुल्क तिरेर निजी अस्पताल जानु पर्ने समस्याको अन्त्य गर्दै मेची अस्पतालमा २०७४ साल भदौ ६ गतेदेखि हेमोडायलिसिस उपचार सेवा सुरु गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५० लाख बजेटबाट चार बेडको हेमोडायलिसिस उपचार सेवाको उद्घाटन तत्कालीन सांसद तथा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरेका थिए । त्यस बेला मेची अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष काँग्रेसका जिल्ला उपसभापति राम कट्टेलले थिए ।
मिर्गौला बिरामीलाई निःशुल्कसहित भरपर्दो उपचार सेवा दिइरहेका अस्पतालले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको ठुलो आर्थिक स्रोत गुमाउँदै २०७७ पुस १ गतेदेखि बिराङ हेल्थ केयरलाई जिम्मा दिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । अस्पताल सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले निर्णय गरेपछि दोस्रो पक्षका अस्पतालका निवर्तमान मेसु डा. पीताम्बर ठाकुर र प्रथम पक्षका बिराङ हेल्थ केयरका प्रमुख व्यवस्थापक प्रिन्स विक्रम झाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
२०७७ पुस १ गतेदेखि ५ वर्षका लागि अस्पतालले बिराङ हेल्थ केयरलाई डायलिसिस विभाग जिम्मा लगाएको हो । सम्झौता पत्रमा भएको सर्त नम्बर ४ बमोजिम प्रथम पक्ष केयरले हेमोडायलिसिस सेवा सञ्चालन गर्नको निम्ति बिरामीको चाप अनुसारको उपकरणहरू व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक कार्यालय स्थापना गर्ने, आवश्यक औषधीहरू भण्डारण गर्ने तथा आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोगमा आइरहेका उपकरणहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ । सो स्थान तथा उपकरणहरू प्रयोग गर्नु दिए बापत केयरले अस्पताललाई प्रति डायलिसिस सेसन बापत रु २०० बुझाउनु पर्ने र बिजुली, पानीको भुक्तानी पनि केयरले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा ५ मा डायलिसिस सेवा सञ्चालन गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरण तथा सामग्रीहरू जस्तै डायलिसिस मेसिन, पानी शुद्धीकरण गर्ने आरओ मेसिन, बिरामीका बेडहरू, बिरामी तथा कुरुवाहरूको मनोरञ्जनको निमित्त टेलिभिजनहरूको व्यवस्था प्रथम पक्ष केयरले मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यदि दोस्रो पक्ष अस्पतालले सो सेवा पहिले देखि नै गर्दै आएको खण्डमा प्रयोग भई आएको उपकरण तथा सामग्रीहरूको अवस्था हेरी आवश्यक परेको खण्डमा सम्झौताको सर्त नम्बर ४ बमोजिम प्रयोग गर्न सक्ने छ । सर्त नम्बर ४ र ५ मा लेखिएको कुरा प्रथम पक्ष अर्थात् केयरलाई फाइदा हुने गरी सम्झौता बनाएको देखिन्छ । अस्पतालले एउटा सर्तमा उपकरण र सामग्री आफै किन्ने भनिएको छ भने अर्को सर्तमा आवश्यकता अनुसार अस्पतालको उपकरण र सामग्री प्रयोग गर्न पाउने भनी लेखिएको छ । सर्त बमोजिम अहिलेसम्म प्रथम पक्ष केयरले अस्पतालकै सम्पत्ति प्रयोग गरी नाफा कमाइरहेको छ । केयरले ६ महिनामा डायलिसिसका लागि नयाँ भवन बनाएको छ, भने दुई वटा डायलिसिस मेसिन र दुई वटा बेड मात्र खरिद गरी ल्याएको छ । नयाँ भवनमा अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । केयरले ल्याएको दुई वटा डायलिसिस मेसिन पनि महिना दिन नचल्दै बिग्रिएर थन्काइएको छ ।
यता अस्पतालको पुरा चार वटा डाइलासिस मेसिनमध्ये एउटा बिग्रिएको छ । तीन वटा मेसिन चालु अवस्थामा छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १ नम्बर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड बजेट डायलिसिसका लागि छुट्टाएपछि अस्पतालले थप ५ वटा मेसिन खरिद गरी ल्याएको छ । ल्याउँदा ल्याउँदै एउटा बिग्रिएकोले चार वटा मात्र नयाँ मेसिन असारको दोस्रो साताभित्र आयो । अब अस्पतालसँग ७ वटा डायलिसिस मेसिन भयो । एउटा आएमा आठ वटा पुग्छ । अस्पतालकै सबै डायलिसिस मेसिन केयरले प्रयोग गरिरहेको छ । डायलिसिस विभागमा पाँच वटा मेसिन बिरामीको उपचार सेवामा प्रयोग भइरहेको छ । दुई वटा नयाँ मेसिन केयरले बनाएको नयाँ डायलिसिस भवनमा लगेर राखेको छ । अहिलेसम्म केयरले आफ्नो एउटा पनि डायलिसिस मेसिन र अन्य उपकरण प्रयोग नगरी अस्पतालकै सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेको देखिन्छ ।
अस्पतालको ठुलो आम्दानीको स्रोत गुमियो
सरकारले विपन्न तथा असहाय मिर्गौला बिरामीको डायलिसिस उपचारका लागि निःशुल्क बजेट छुट्टाएको छ । सरकारले मिर्गौला बिरामीका लागि बजेट छुट्टाएपछि अहिले धमाधम निजी अस्पतालहरूले पनि डायलिसिस सेवा सुरु गर्न थालेका छन् । मिर्गौला बिरामीको उपचार गराए बापत अस्पताललाई राम्रो फाइदा हुने बुझेकाले अस्पतालहरू पनि यस सेवालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अघि बढेको निजी अस्पताल सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
यता मेची अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको डायलिसिस सेवा निजी कम्पनीलाई दिएपछि सबै आश्चर्य चकित परेका छन् । सरकारले प्रति मिर्गौला बिरामीलाई एक पटक डायलिसिस गरेबापत २५ सय रुपैयाँ दिँदै आएको छ । मेचीमा हाल मिर्गौलाका ४१ जना बिरामीले नियमित सेवा लिइरहेका छन् । एउटा बिरामीले हप्ता दुई पटक डायलिसिस गर्न आउनु पर्ने हुन्छ । महिनामा एक जना बिरामीले आठ पटक डायलिसिस गर्नुपर्छ । शनिवारबाहेक हप्तामा ६ दिन सेवा दिँदै आएको बिराङ हेल्थ केयरले एउटा बिरामीलाई महिनामा आठ पटक डायलिसिस गरेबापत सरकारबाट २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । ४१ जनाको बिरामीको हिसाब गर्दा महिनाको ८ लाख २० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा आकस्मिक भन्दै बिरामीबाट बढी रकम असुलेको बाहेक । १२ महिनाको हिसाब गर्दा करिब ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँ सरकारबाट पाउँछन् । केयरले व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको खर्च कटाएर ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक नाफा कमाउने गरेको प्रस्ट देखिन्छ । अस्पताल प्रशासनको ठुलो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत कसले र के स्वार्थले गुमाउँदै निजी कम्पनीलाई दिएको भन्दै अहिले चर्चा चुलिएको छ ।